Vaovao - Fampidirana ny diôzida klôro
Chlorine Dioxide Iray vovonan'ny singa
Kitapo singa roa an'ny Chlorine Dioxide
Chlorine Dioxide Sachet 20G (Extrait-famotsorana)
Chlorine Dioxide Sachets 20G (famoahana haingana)
Fampidirana ny diôzida klôro
Chlorine dioxide (ClO2) dia entona mavo-maitso misy fofona mitovy amin'ny klôlôra miaraka amin'ny fahaizany mizara, miditra ary manadidy tena tsara noho ny toetrany entona. Na dia misy klôro amin'ny anarany aza ny diôlômanina klôro, dia samy hafa be ny fananany, mitovy amin'ny karbaônôida karbôna dia hafa noho ny karbaona fototra. Ny dioksidan'ny klôro dia nekena ho famonoana otrikaretina nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 1900 ary nankatoavin'ny US Environmental Protection Agency (EPA) sy ny US Food and Drug Administration (FDA) ho an'ny fangatahana maro. Izy io dia naseho fa mahomby amin'ny alàlan'ny spectrum malalaka, anti-inflammatoire, bakteria, fungicidal, ary virucidal agents, ary koa deodorizer, ary koa afaka mamono ny beta-lactams ary manimba ny pinworms sy ny atodiny.
Na dia manana "chlore" amin'ny anarany aza ny klôro diôlôida, dia tsy mitovy amin'ny an'ny klôro ny simia azony. Rehefa mihetsika amin'ny zavatra hafa dia malemy kokoa sy mifantina kokoa izy io, mamela azy io ho sterilizer mahomby sy mahomby kokoa. Ohatra, tsy mihetsika amin'ny amoniaka na amin'ny ankamaroan'ny zavatra simika. Ny diôdiômaôma klôma dia manapoaka ny vokatra fa tsy mampangotraka azy ireo, noho izany tsy toy ny klôro, ny diôlôida kôlôida dia tsy hamokatra fitambarana voajanahary tsy maniry eo amin'ny tontolo iainana misy klôro. Ny diôzôma klômaina koa dia gazy mavo-maitso hita maso mamela azy io ho refesina amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny fitaovana photometric.
Ny diôdômanina klôlôma dia ampiasaina betsaka ho toy ny antimicrobial ary ho toy ny agents oxidizing amin'ny rano fisotro, rano fanodinana akoho amam-borona, dobo filomanosana ary fanomanana fikasana vava. Izy io dia ampiasaina hanadiovana voankazo sy legioma ary koa fitaovana ho an'ny fikarakarana sakafo sy zava-pisotro ary ampiasaina amin'ny laboratoara fikarohana siansa. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fitsaboana mba handoto ny efitrano, ny passthroughs, ny isoliter ary koa ny sterilant ho an'ny sterilization ny vokatra sy ny singa. Ampiasaina be koa izy io mba handefasana, hanalefaka, ary hanadioana fitaovana marobe, toy ny cellulose, taratasy-pulp, lafarinina, hoditra, tavy sy menaka ary lamba.
Fotoana fandefasana: Dec-03-2020
Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2005 ary ny foiben-toeran'ny foibeny dia ao shijiazhuang izay toerana kanto any Chine. Ny orinasa lehibe indrindra dia ny famokarana sy ny varotra ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina sy ny famonoana afo, ary koa ny fanondranana teknolojia klôro dioksida ……
Trano Zhongyuan No.368 Youyi North Street Shijiazhuang China